Tanterahina eny amin’ny Coliseum Antsonjombe-Antananarivo, anio Alahady 19 janoary 2020 nanomboka tamin’ny 10 ora maraina ny fanompoam-pivavahana ataon’ny Filoha sy ny Biraon'ny Mpiandraikitra Foibe FJKM ho fitondrana am-bavaka ny taom-piasana 2020 sy ny Filohan'ny FJKM sy ny ankohonany ary ny asa fanompoany. Tsy nisy fanompoam-pivavahana ao am-piangonana amin'ity Alahady ity. (Jereo Sary Tohiny)
Nindaosin’ny fahafatesana ny zoma 17 janoary 2020, i Thérèse Tanguay Dion, reny niteraka an’ilay mpihira malaza Céline Dion. Mpandraharaha i Thérèse Tanguay Dion, ary mpanentana fandaharana tamina fahitalavitra tany Canada izy tamin’ny fahatanorany. 92 taona izy izao nodimandry izao. 14 mianadahy ry Céline Dion, ary izy no zandriolona sady faravavy amin’izy mpiray tampo. Tany ampitetezana faritra any Etazonia, manao fampisehoana i Céline Dion, no izao nodimandry izao ny reniny. (Jereo Sary Tohiny)
Montsana ny amboaran'i Sinoa ny taona 2018, nanao mofomamy 3.2km tany Zixi. Ny alarobia 15 janoary, dia mpanao gâteau 1500, tany Kerala Inde no nanao mofomamy vanila mirefy 6.5km izay milanja 27 000kg nandritra ny 4ora. Siramamy sy lafarinina 12 000kg no lany tamin'izany. Izao no natao, hoy ireto mpanao gâteau ireto, anehoana eo anatrehan'izao tontolo izao, ny fahaizamanao ananan'izy ireo, satria dia madio sy tsara tokoa ny mofomamy vanila namboarin'izy ireo. (Jereo Sary Tohiny)
Tanàna nahaterahan’i Dadi Love, mpanakanto, i Antsohihy. Nandalo aty an-toerana izy mivady amin’izao taona vaovao, ary mahatsiaro manokana ireo marary tsaboina ao amin’ny hopitaliben’Antsohihy, nanome hery azy ireo sy nanolotra izay voatsirambin’ny tanana. « Tao ny nitomany amin’ny haravoana, tao no nitsiky an-kafaliana, tao ny marary tafapetraka tampoka tsy tadidiny intsony hoe marary izy noho ny hafaliana satria mahatsapa fa manana havana marina izy ireo izay tsy manadino », hoy i Dady Love. « Tsoriko fa tsy hieritreritra tambiny amin’ny soa izay ataoko amin’ny mpiara-belona amiko ny tenako fa maimaimpoana ny fanomezan’Andriamanitra ny talenta ananako izay ahazoako vola, ka tsy tokony hahafaty antoka ahy mihitsy ny hanampy ny hafa amin’izay kely ananako, ka mivavaka ho azy ireo mba ho sitrana soaman-tsara », hoy hatrany ity mpanakanto ity tao amin’ny pejiny facebook. (Jereo Sary Tohiny)
Noraisina hiasa ao amin'ny Biraon'ny Faritra nanomboka androany 6 janoary 2020 i Ra-Tin « Kopi-kole Rossy 2019 ». Fampanantenana nataon-dRazafindrafito Lova Paupil, Goverinoran'ny Faritra Matsiatra Ambony ny « hanomezana asa maharitra azy mba hahafahany mifantoka bebe kokoa amin'ny tontolon'ny Mozika sy ho tantsoroka ho azy eo amin'ny fiainana andavanandro amin'ny maha raim-pianakaviana azy », hoy ny fampitam-baovao nataon’ny Faritra. Rakotonirina Augustin no tena anarany. Ra-Tin no fiantso sy nahafantaran'ny maro azy nandritra ny fifaninanana. Nanohana be an-dRa-Tin na tamin’ny fihirana, fiantsehatra, eny ara-pitaovana zavamaneno (angorodao sy gitara) i Rossy. Nankasitra ny zava-bitan’i Ra-Tin sy ny firaisankinan'i Fianarantsoa nanohana azy ihany koa ny Governoran’i Matsiatra Ambony tamin'izao fandresena azony izao. (Jereo Sary Tohiny)
Tanteraka soamantsara ny lanonana namaranana ny taona 2019, ka niarabana ny taona vaovao 2020 tao Paris, niaraka tamin'ny mpihira fanta-daza Wawa sy ireo mpanakanto maro nanafana ny lanonana. Nankasitraka ny fiarahana miasa efa ampolo taonany maro ireo mpikarakara, ka dia natolotra an'i Wawa ilay fiara Limousine nitondrana azy tao Paris, sady ho fanamarihana ihany koa ny tsingerin-taona nahaterahany. Mamarana any Rennes ny zoma izao, ary manakatona ny diany nitety an'i Eoropa i Wawa sy ireo mpanakanto namany amin'ny sabotsy izao any Bordeaux, dia hiazo an'i Madagasikara amonjy ny tanindrazany izy. (Jereo Sary Tohiny)
Izany no hafatra napetraky Wawa, "prince du Salegy", raha hiazo an'i Paris Rungis 47 rue des Solets 94150, tamin'ny limousine, izay nitondran'ny mpikarakara ny lanonana an'ity mpanan-kanto Malagasy malaza ity, ho fanaovam-belomana ny taona 2019, ka hiarabana ny taom-baovao 2020 anio alina 31 desambra. Hafana tokoa ny fety satria dia ny tarika Wawa iray manontolo no ampiakatra motro ambiance, miaraka amin'ny Big MJ, Lico Kininike ary Rijade. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 30 décembre 2019 09:59
Wawa Marseille: Tsy nety nisaraka na maraina aza ny andro, direction Paris 31 décembre
Andro mazava fa tsy nisy niala ny olona rehetra niaraka nifety tamin'i Wawa sy ny tarika manontolo tao amin'ny Florida Palace Marseille ny alin'ny sabotsy hifoha ny alahady omaly. Feno ny trano, ambiance motro tsy lany. Hiazo an'i Paris ny tarika ka hanafana ny lanonana hanaovam-beloma ny taona 2019. Hiaraka aminy, ao Rungis 47 rue des Solets 94150, amin'izany ry Big MJ, Lico Kininike, Rijade. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 30 décembre 2019 09:38
Tarika AmbondronA: Seho feno sy niavaka tao amin’ny Palais des Sports
Fahombiazana ! Izay no mahafintina ny seho natolotry ny tarika AmbondronA tao amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny alahady tolakandro. Nanolotra seho niavaka ny tarika, na teo amin’ny sehatra izany na ny hira. Nanome voninahitra manokana an’i Dadah Mahaleo ny tarika nandritra ny seho. Nanome sehatra ary nampiara-peo tamin-dry Reko - Fy & His Band (Fy Rasolofoniana) sy tarika Iraimbilanja nosolin’i Roger tena ihany koa. Niara-niredona ny hira nalahatry ry Beranto, Kix, Honty, Ranto ary Blanc ny mpijery maro nameno trano, izay saika tanora ny ankamaroany. Ny ketrika.com moa no nisahana ny famarotana ny tapakila fidirana teo amin'ny tranokala. (Jereo Sary Tohiny)
GUICHET FERME sur www.ketrika.com pour le Spectacle Ambondrona du 29 décembre, 2000 billets de réservation ont été livrés ; 100 billets premium et 500 billets simples. Les billets doivent être récupérés auprès des points relais avant le samedi 28 décembre 2019 à 17h. Il n’y aura pas de récupération de billet le jour du spectacle. Ketrika.com remercie les utilisateurs qui l'ont fait confiance. Rendez-vous sur www.ketrika.com pour bénéficier des prix réduits pour toute l’année.